Apple inotangisa yekutanga beta yeruzhinji yeIOS 9.2 | IPhone nhau
Apple inotangisa yekutanga beta yeruzhinji yeIOS 9.2
Isu hatina kuzvitarisira, asi maminetsi mashoma apfuura Apple yakatanga iyo yekutanga yeruzhinji beta yeIOS 9.2. Kuvhurwa kwave kungori vhiki mushure mekutanga beta kune vanogadzira uye zvakatoshamisika nekuti inoenderana neyekutanga beta yevagadziri maererano nenhamba yacho, asi zvingangoita kuti vhiki yemusiyano yashandiswa kupuruzira vhezheni yevanogadzira vashoma kuti vazvigadzirire kuitira kuti igadzikane zvakakwana kuburitsa vhezheni yeruzhinji. Ehe, kuvhurwa kwakaitika nemusi weChina, zuva revhiki kwakaburitswa yazvino iOS 9.0 betas.
Iyo yekuvandudza inofanirwa kuoneka kuburikidza neOTA kune beta testers yeruzhinji vhezheni vane iyo Apple beta mbiri yakaiswa. Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti kuti ugone kuisa chero vhezheni yeIOS unofanirwa kuve neinenge 50% bhatiri pane iyo iPhone, iPod kana iPad kana kuti ive yakabatana kune magetsi.
iOS 9.2 ichava vhezheni iyo tarisa pakuvandudza mashandiro Kazhinji yeiyo system, kunyange hazvo kumwe kunatsurudzwa kuchisanganisirwa senge shanduko dzakakosha muSafari yekuona mutongi, iyo inoshanda kuitira kuti tikwanise kushandisa Safari kubva kune zvimwe zvinoshandiswa, sezvinoita Tweetbot Izvi zvakanaka nekuti isu tinogona, semuenzaniso, kushandisa iyo Safari yekuverenga yekutarisa kuverenga Twitter zvinongedzo.
Uye zvakare, sekutaura kunoita mumwe wedu Luis Padilla, pachavepo chii chitsva muMusic app izvo zvinotibvumidza isu kuve neruzivo rwuri nani pamusoro pechimiro cheimwe kurodha pasi, senge mukana wekurodha pasi mamwe maApple Music rondedzero. Parizvino, kuziva kana tinga dhawunirodha zvimwe zvinyorwa kunonetsa. Chero chinhu chinoita kuti zvinhu zvive nyore, chokwadika, chichagara chichigamuchirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Apple inotangisa yekutanga beta yeruzhinji yeIOS 9.2
Pane akambozviedza ??? Makadii???
David PS akadaro
Icharamba iri imwe isingatarisirwe beta: haizove yakatsetseka seIOS 6 kana iOS7, ichave inononoka kupfuura iOS 8, uye zvishandiso zvekare senge iPHone 4S uye iPad 2 NA3 zvicharamba zvichinonoka.
Ndokunge, ndinotarisira imwe beta yeIOS 9 isingabudirire seyakare yapfuura.
Pindura David PS
Uye kuchine vanhu here vanoshandisa michina yekare yakadai? Ndakaiyedza uye inomhanya zvinoshamisa nekukurumidza, ine kuzvitonga kuri nani
Ehe hongu, kuchine vanhu vasina chikonzero chekukweverwa nenhau dzichangoburwa kana vaine chishandiso chinoshanda zvakakwana uye hapana chekugodora nyowani. Asi Apple haifanire kutaura kuti iyo nyowani iOS ichavandudza mashandiro emhando dzekare apo (izvozvi, uye zvirokwazvo nguva dzose) inhema. Ndeipi dambudziko mukuziva kuti haina kukodzera kumutsiridza? Iwe unorasika, ndizvozvo kana iko kuvandudzika kukuru uko kuve nepakati emo chigunwe inofungidzira, zvakashata!
Waita basa Victor !!! Kuisa pane iyo iPhone 6s Plus!
ZERO LAG mune iyi vhezheni !!
Ndakaiyedza pane yangu iPhone 6 uye inoshanda mushe, ndakaona kuti iyo yakawanda yakawanda inotsvedza uye inokurumidza, uye hapana lag kusvika parizvino.
Zvinoshamisa! Mushure memazuva matatu ndaona shanduko inoonekwa mukuita kwebhatiri. Ndanga ndichiishandisa kwe3h 6 min uye ndakamirira kwe45h 28 min. Ini ndinofunga iko shanduko inoshamisa. Pamusoro pekugadzikana uye kuyerera.
BABA VAKO (@elbis_cocho_) akadaro
Ndakaiisa, uye ndinodzima mimhanzi yangu yese 🙁
Pindura kuna BABA VAKO (@elbis_cocho_)
Rop, gadzira maumbirwo ane madhi muapp yevhiki
Zvese nezve 3D Kubata kwePhones nyowani